Tontolon’ny hira : ho be ny ho hadino fa hisy ny tsy ampoizina | NewsMada
Tontolon’ny hira : ho be ny ho hadino fa hisy ny tsy ampoizina
Anisan’ny zavakanto ma­hita faisana tokoa ny tontolon’ny hira amin’izao vanim-potoan’ny valanaretina covid-19 izao. Tsy misy ny seho azo atao. Iray amin’ireo antoka mampijoro ny talenta sy ny fahalalan’ny hafa ny mpanakanto (mpihira, mpamoronkira, mpitendry zavamaneno, mpandihy, sns) anefa io. Azo lazaina ho antom-pisian’ny mpanakanto ihany koa aza, angamba, ny fizarana sy fampitan-kafatra ho an’ny hafa.
Raha izao anefa no mitohy, ireo tarika na mpanakanto na mpihira, mbola tsy nahatafapetraka ny “soniany”, mety ho sahirankirana ihany vao ho tonga amin’izany, aorian’ny fihibohana. Azo inoana mantsy fa somary hitodika bebe kokoa any amin’ny fanarenana ny toekarem-pirenena sy ny toekaren’ny isam-batan’olona ny laharam-pahamehana amin’izay fotoana izay. Mety hisy koa anefa tarika na mpanakanto hisongadina tampoka sy tsy ampoizina satria hitondra zava-baovao mahadona ny fon’ny Malagasy. Tranga mety hanova ny endriky ny hira ho heno any amin’ny haino aman-jery isan-karazany. Ho hita eny an-tsehatra. Hiverimberina eny am-bavan’ny olona, sns.
… Mila mikaroka sy mandalina anefa izay mpanakanto te hiroso amin’io dingana io. Miala amin’ny efa fanaon’ny sasany. Mamoitra ny maha izy ny tena. Manary ny fakan-tahaka be fahatany, sns. Maro ny lesoka eo amin’ny tontolon’ny hira eto Madagasikara ka izay afaka mandingana azy ireny no azo antoka fa hisongadina sy ho tian’ny olona, aorian’izao vesatra mahazo azy izao!